ရုရှားနိုင်ငံ ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှုမြို့တော်တွင် သီတဂူဆရာတော်ကြီး ဦးဆောင်တည်ထားမည့် ရွှေစည်းခံ? - Yangon Media Group
ရုရှားနိုင်ငံ ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှုမြို့တော်တွင် သီတဂူဆရာတော်ကြီး ဦးဆောင်တည်ထားမည့် ရွှေစည်းခံ?
ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာ ၂၄-သီတဂူ ဆရာတော်ကြီးဦးဆောင်တည်ထား မည့် ရုရှားနိုင်ငံရှိ ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေး မှုမြို့တော်တွင် ရွှေစည်းခုံပုံစံတူစေ တီတော်အတွက် ရွှေပန္နက်တင်၊ ရတနာအုတ်မြစ်စီမင်္ဂလာအခမ်း အနားကို သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်၌ ကျင်းပ ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါစေတီတော်ကို ရုရှား နိုင်ငံ မော်စကိုမြို့နှင့် မိုင် ၉ဝ အ ကွာ ကာလုဂါ၊ အတနာမီရှိကမ္ဘာ့ယဉ် ကျေးမှုမြို့တော်၌ တည်သွားမည် ဖြစ်သည်။
ရုရှားရှိရွှေစည်းခုံပုံတူစေတီ တော်၏အလှူရှင်များမှာ တပ်မ တော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ် ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နှင့်ဇနီး ဒေါ်ကြူကြူလှမိသားစုအမှူးပြု သောတပ်မတော်(ကြည်း၊ ရေ၊ လေ၊ မိသားစု)ဦးအောင်ကိုဝင်းနှင့်ဇနီး ဒေါ်နန်းခမ်းထွေး(ကမ္ဘောဇ)အမှူး ပြုသော လုပ်ငန်းရှင်များ၊ မြန်မာ နိုင်ငံပြည်တွင်း၊ ပြည်ပရှိကုသိုလ်ရှင် များ၏အလှူဒါနဖြစ်သည်။
”သီတဂူဆရာတော်ဘုရားကြီး နဲ့ အလှူရှင်တပ်မတော်ကာကွယ် ရေးဦးစီးချုပ်တို့က ရွှေစည်းခုံစေ တီတော်ကိုတည်ကြတာပါ။ လပြည့် နေ့မတိုင်မီ အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက်က မော်စကိုမြို့မှာရှိတဲ့ မြန်မာထေရဝါဒဗုဒ္ဓ စင်တာမှာ သိမ်တည်ဆောက်ဖို့ သိမ်သမုတ်ကံဆောင်မင်္ဂလာ၊ ပန္နက် တင်၊ ရတနာအုတ်မြစ်စီမင်္ဂလာ တွေဆောင်ရွက်ကြတယ်။ သီတင်း ကျွတ်လပြည့်နေ့ အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်မှာတော့ ရွှေစည်းခုံပုံစံတူ စေတီတော်အတွက် ရွှေပန္နက် တင်၊ ရတနာအုတ်မြစ်စီမင်္ဂလာအ ခမ်းအနားကျင်းပတာဖြစ်ပါ တယ်”ဟု သီတဂူကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္က သိုလ်မှ ပါမောက္ခအရှင်ကောဝိဒ သိရီ (သီတဂူစတား) က အောက် တိုဘာ ၂၄ ရက်က မိန့်သည်။
အခမ်းအနားကို သီတဂူဆရာ တော်ကြီးနှင့်အတူ အင်းစိန်ရွာမ ဆရာတော်ကြီး၊ သိမ်တော်ကြီးဆရာ တော်ကြီး၊ ဓမ္မဒူတဒေါက်တာအရှင် ပညိဿရာဘိဝံသ၊ ဓမ္မဒူတဒေါက် တာအရှင်ဆေကိန္ဒ၊ ရွှေစင်တိပိဋက ဆရာတော်အရှင် ဂန္ဓာမာလာ လင်္ကာရ၊ သီတဂူကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္က သိုလ်မှစာချကထိက ဆရာတော် များ၊ အမေရိကန်၊ ရုရှား၊ ဂျာမနီ၊ အင်္ဂလန်၊ ကိုရီးယားမှတပည့်ကျောင်း ထိုင်ဆရာတော်များနှင့်ဒါကာယ၊ ဒါယိကာမများတက်ရောက်ခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်အပါအဝင် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များကို သတင်းအမှားများဖြင့် ပုံဖော်?
လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များကို တရုတ်ဘက်မှ တင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်မည်ဆိုပါက ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် များစွာအထောက်အကူပြုနိုင်ဟု စီးပွားကူးသန်းဒုဝန်ကြီးဆို
ဘူးသီးတောင်ရဲကင်းစခန်းလေးခုအား အကြမ်းဖက်မှုကို တပ်မတော်က စစ်ဆင်ရေးလုပ် နှိမ်နင်းသွားမည်ဟ??